Fananganana lalamby haingam-pandeha any Laos - Wuxi Lianyou Plastic Industry Co., Ltd.
Fanamboarana lalamby haingam-pandeha any Laos
Amin'ny maha lalamby mampitohy an'i Shina sy Laos, ny lalamby China-Laos dia manomboka amin'ny tanànan'ny Yuxi, faritanin'i Yunnan, Sina, mamaky ny tanànan'i Pu er, Xishuangbanna, ny seranan-tsambon'i Mohan, luang Prabang, toeram-pizahan-tany malaza any Laos, ary mifarana ihany any Vientiane, renivohitr'i Laos.
Ny fananganana lalamby China-Laos dia natomboka tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny Desambra 2016. Hatramin'izao, ny fizotry ny lalamby China-Laos dia nandalo 5 taona. Anisan'izany ny faritra China an'ny lalamby China-Laos mandalo ny faritry karst, ary ireo mpanao trano dia nisedra fahasahiranana sy fahasahiranana maro tsy azo eritreretina ...
Ny lalamby China-Laos dia mizara ho an'ny faritra China ary ny faritra Laos, izay samy namboarin'i Chine. Ny hafainganan'ny famolavolana ny lalamby China-Laos dia 160 kilometatra isan'ora, izay ambany noho ny lalamby an-toerana hafa. Izany dia vokatry ny tontolo ara-jeolojika an'ny lalamby, izay be tendrombohitra sy be havoana, noho izany ny haingam-pandeha 200 kilometatra isan'ora dia nahena 160 kilometatra isan'ora.
Ny faritra amin'ny China-Laos Railway avy any Yuxi mankany Mohan dia mihoatra ny 500 kilometatra, mamakivaky ny faritra be pitsipi-pitondran-tena ao Shina. Eto dia misampana ny tendrombohitra sy ny renirano, ny hantsana sy ny hantsam-bato ary ny endri-javatra geomorphology karst. Ireo mpiasan'ny lalamby dia niady mafy, niady tamin'ny laharana voalohany, ny ezak'izy ireo hamindra ilay endrika.